Mpitari-tolona Mpitondra amin'ny sehatra maro momba ny COVID-19: krizy tsy fitoviana amin'ny vaksiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Mpitari-tolona Mpitondra amin'ny sehatra maro momba ny COVID-19: krizy tsy fitoviana amin'ny vaksiny
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny lehiben'ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena, ny Vondrona Banky Iraisam-pirenena, ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana ary ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Varotra dia nihaona tamin'ny mpitarika ny Africa Vaccine Acqu acquisition Trust (AVAT), Africa CDC, Gavi ary UNICEF.
Vondrona marobe no miatrika sakana amin'ny vaksinin'ny ambaratonga haingana any amin'ny firenena ambany sy ambany.
Ny ankamaroan'ny firenena afrikanina dia tsy afaka miditra amin'ny vaksinina ampy mba hahatratrarana ny tanjona eraky ny fandrakofana 10%.
Ny krizy tsy fitoviana amin'ny vaksiny dia mitarika fiviliana mampidi-doza amin'ny tahan'ny fahaveloman'ny COVID-19 sy ny toekarena manerantany.
Tamin'ny fivoriana fahatelo nataony dia nihaona tamin'ny mpitondra ny Vaksinina Acquisite Trust (AVAT) avy amin'ny Multilateral Leaders Taskforce momba ny COVID-19 (MLT) - ireo lehiben'ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena, World Bank Group, World Health Organization ary World Trade Organisation. , Africa CDC, Gavi ary UNICEF hiatrehana ny sakana amin'ny vaksinina miakatra haingana any amin'ireo firenena manana fidiram-bola ambany sy ambany, indrindra any Afrika, ary namoaka ity fanambarana manaraka ity
“Ny famoahana vaksinin'ny COVID-19 manerantany dia mandroso amin'ny hafainganam-pandeha roa samy hafa mampatahotra. Latsaky ny 2% ny olon-dehibe no vita vaksiny tanteraka any amin'ny ankamaroan'ny firenena ambany karama raha oharina amin'ny 50% any amin'ny firenena be vola.
“Ireo firenena ireo, izay ny ankamaroany dia any Afrika, dia tsy afaka miditra amin'ny vaksinina ampy hihaona amin'ny tanjona manerantany misy fandrakofana 10% amin'ny firenena rehetra amin'ny volana septambra ary 40% amin'ny faran'ny 2021, tsy misy afa-tsy ny tanjon'ny Vondrona afrikanina 70% amin'ny 2022 .
“Ity krizy tsy fitoviana amin'ny vaksiny ity dia mitarika fiviliana mampidi-doza amin'ny tahan'ny fahaveloman'ny COVID-19 sy ny toekarena manerantany. Mankasitraka ny asa lehibe ataon'ny AVAT sy COVAX izahay hanandrana sy hiatrika an'io toe-javatra tsy azo ekena io.
“Na izany aza, ny famahana am-pahombiazana ity tsy fahampian'ny vaksinina mahery vaika ity any amin'ireo firenena manana fidiram-bola ambany sy ambany, ary manome ny AVAT sy COVAX tanteraka, dia mitaky ny fiaraha-miasa maika amin'ireo mpamokatra vaksinina, ireo firenena mpamokatra vaksiny, ary ireo firenena izay efa nahatratra ny tahan'ny vaksiny avo. Hiantohana ny firenena rehetra hahatratra ny tanjona eran'izao tontolo izao, farafahakeliny, fandrakofana 10% hatramin'ny volana septambra ary 40% amin'ny faran'ny 2021:
Miantso ireo firenena nanao trangana vaksinina marobe izahay mba hifanakalo fotoana fohy amin'ny COVAX sy AVAT.
Miantso ireo mpanamboatra vaksininy izahay mba hanao laharam-pahamehana ary hanatanteraka ny fifanarahan'izy ireo amin'ny COVAX sy AVAT, ary hanome vinavinan'ny mpamaky vina mazava sy mazava.
Miangavy ny G7 sy ny firenena rehetra mizara doka izahay mba hanatanteraka ny fampanantenany maika, miaraka amin'ny fahitana ny fantsom-pivoarana, ny fiainam-piainan'ny vokatra ary ny fanampiana ireo famatsiana fanampiny, satria zara raha nampidirina ny 10% amin'ny doka efa vita 900 tapitrisa.
Miantso ny firenena rehetra izahay mba hanafoana ny famerana ny fanondranana sy izay sakana hafa amin'ny varotra amin'ny vaksinin'ny COVID-19 sy ny fampidirana ao amin'ny famokarana azy ireo.
“Mifanentana amin'ny fampivoarana ny asanay amin'ny COVAX sy ny AVAT izahay hiatrehana ny olana amin'ny famindrana vaksinina, ny famokarana ary ny varotra maharitra, indrindra any Afrika, ary ny fanentanana ny famatsiam-bola sy ny famatsiam-bola ho an'ireo tanjona ireo. Hizaha ihany koa ny rafitra famatsiam-bola hialana amin'ny filan'ny vaksinina amin'ny ho avy araka ny angatahan'ny AVAT. Hiaro ny vinavinan'ny famatsiana sy fampiasam-bola tsaratsara kokoa izahay hampitomboana ny fiomanana amin'ny firenena sy ny fahaizany mandray. Ary hanohy hanatsara ny angon-drakitra izahay, hamantatra ireo banga ary hanatsara ny mangarahara amin'ny famatsiana sy ny fampiasana ireo fitaovana COVID-19 rehetra.
“Ny fotoana hanaovana hetsika dia izao. Tandindomin-doza ny lalan'ny valanaretina - sy ny fahasalaman'izao tontolo izao. ”
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina nanao hoe:
"Nanaiky tanteraka izahay fa hiantso ny firenena rehetra hanafoana ny famerana ny fanondranana sy ny sakana hafa amin'ny varotra COVID-19 sy ny fampidirana ao amin'ny famokarana."
“Zava-dehibe ihany koa ny fandraisan'anjaran'ny fizahan-tany amin'ity resaka ity. Indostrialy tena ilaina amin'ny firenena afrikanina maro ny fizahantany. ”